Wararka - BAMBARKA QARANKA MA DIIDI KARO SABABTA BIYAHA
Hawo ayaa ku jirta dariiqa iyo matoorka
(1) qaar ka mid ah dadka isticmaala ma buuxiyaan biyo ku filan kahor inta bamku uusan bilaaban; mararka qaarkood biyaha u muuqda inay ka soo qulquleen godka hawo-mareenka, laakiin uma jeedin mashiinka mashiinka inuu hawo gebi ahaanba daalayo, isagoo u daayay hawo yar oo wali ku jirta tuubada ama tubbada
(2) oo leh bamka biyaha ee laxiriirta qaybta jiifka ah ee jihada socodka biyaha ee codsiga in kabadan 0.5% ee foorarsiga hoos udhaca, iskuxirka marinka mashiinka ayaa ah dhamaadka ugu sareysa, ma ahan gebi ahaanba jiifa. Haddii aad foorarsato, tuubbada tubada ayaa hawo haysa, yaraysa dhuumaha biyaha iyo bambooyinku ku jiraan faakiyuunka, oo saameeya biyaha.
(3) xirxirida bamka ayaa daalay adeegsi waqti dheer ah ama xirxirida oo aad u dabacsan, taasoo keeneysa in biyo fara badan laga saaro meesha udhaxeysa xirxirida iyo usheeda dhexe ee usheeda dhexe. Natiijo ahaan, hawada banaanka ah waxay ka soo galeysaa gudaha matoorka meelaha banaan ee ka banaan, iyadoo saameyneysa biyaha.
(4) tuubada laga soo galo sababo la xiriira mustaqbalka fog ee biyaha hoostooda, godadka daxalka derbiga tuubbada, shaqada bamka biyaha ka dib marka ay biyuhu hoos u dhacaan, marka godadkan ay soo gaadhaan biyaha, hawada ka soo baxda godka biyaha.
(5) dildilaaca xusulka biibiile, tuubooyinka biyaha iyo bambooyin biyo oo ku xiran farqiga yar, waxay u badan tahay inay hawo ka dhigayaan tuubada biyaha.